Amagilebhisi - lokhu ingenye amasiko ethandwa kakhulu zonke wensimu. Elimnandi amajikijolo amnandi iphelele njengendlela dessert. Kungani sikhetha amagilebhisi Elegant njengoba protagonist kwalesi sihloko? Impendulo elula yokuthola, ikakhulukazi uma ubuza abashayeli bamaloli, ngubani usunolwazi oluhle kakade kulinywe yayo kusayithi. Unomuzwa esihle, ngisho ezindaweni ezisenyakatho futhi uvuthwe kahle sasehlobo esifushane. Kodwa inzuzo yayo esemqoka - inyama ithenda ngendlela emangalisayo futhi namanzi, okuyinto ngokuvamile libhekene nezinhlobonhlobo eningizimu.
Isici wokuqala wathola amagilebhisi Elegant: kusesenesikhathi. Futhi lokhu akumangalisi, ngoba yokuvuthwa amajikijolo sekuqhubeke 100-110 suku. Leli fomu hybrid, okuyinto elisuselwa Institute okuthiwa Ya. I. Potapenko. ezihlukahlukene Wadala ukulima in the nemibandela isiqephu isilinganiso kanye enyakatho yeRussia. Ngakho-ke, it is ukugxila nezikhathi ukuguga. Vele izinyanga ezintathu liyadingeka ukuqinisekisa ukuthi izimbali babé kweqembu namanzi.
yamagilebhisi ebukekayo ezifuywa bewela Frumoasa Albea futhi unguNjabulo. Thola imiphumela wajabula kakhulu ne balimi, washeshe hit the brand kwabayishumi abaphasa ngamalengiso. Hybrid wathatha kokubili oyisemkhulu. INjabulo inikezwe ukumelana nezifo futhi ikhono buthelela ushukela njengoba Frumoasa Albea - amakinati esiyingqayizivele. Khanyisa anemibala ithebula grade singaba usizo kabi e wesakhiwo engadini bakithi. It Kunconywa ukulima eningizimu yezwe, kodwa kutshalwa ngempumelelo cishe lonke.
Amagilebhisi abashayeli bamaloli Elegant ujabule okumnandi nje kuphela, kodwa futhi amajikijolo ekuseni kakhulu. Ekupheleni kuka-July - ekuqaleni kuka-August etafuleni lakho kuyoba ezithelo ezinhle ezinephunga elimnandi. It zingatshalwa ku anezikhala welulela noma usethe ukwesekwa ezikhethekile. Shrub sikhula kancane kancane, isizini efudumele ingazami ukufinyelela osayizi enkulu. Vine uvuthwe kahle. Ehlathini akunakubangelwa ekhula ongaphakeme, ikakhulukazi uma fuza hle cophelela of him, nje kokukhipha amahlumela axillary.
Luyaqhakaza kwentwasahlobo, ngemva kwalokho kwakhiwa isambulela ibhulashi lapho amajikijolo uyokwakha. Lena isizathu esiyinhloko esenza amagilebhisi etshalwa futhi enhle. Incazelo ezihlukahlukene kufakazela ukuthi kungcono kunazo zonke izinto ezingenzeka ukukhethwa Russian ukunikela. kwakhiwa cylindrical isesimweni, behlanzekile kakhulu, ephelele ukukhonza Bunch is. Ngokuvamile ibhulashi obukhulu, kodwa bangaba okuxekethile ngaphansi kwezimo ezingezinhle. Ihlukuzo elilodwa enesisindo 400 g
Basuke mikhulu, ngamunye, ngamunye nesisindo 7, oluhlaza ukukhanya, e ukhule ngokugcwele, ziba cishe esobala, segolide. Kwakuphakathi nalesi sikhathi Muscat ukunambitheka esiyitholayo kakhulu kunazo. Ifomu amajikijolo kancane side, nge tip esicacile. I amajikijolo akhiwa elimhlophe, cishe Milky. Kodwa njengoba zikhula izinguquko umthuzi cishe ophuzi. Ukuze wenze lokhu, kubalulekile ukuthi iwe elangeni. Ngakho-ke, lapho bunch aluvuvukalanga eshiya elibazungezile kumelwe unqunywe. Lokhu ephumelelisa elikhulu ukubonakala amajikijolo. Ngaphandle kokuthi ukukhanya kwelanga izohlala eliphaphathekile futhi, naphezu kweqiniso lokuthi bona ezidliwayo, ngeke ukumelana nokuncintisana ezimakethe.
Indlela ukutshala amagilebhisi entwasahlobo
Lapho kuqala izinsuku zokuqala libalele ungaya emakethe noma eliseduze Ezolimo nursery ukuthenga izithombo eliphezulu. Phakathi nenkathi Ehlobo, sithole amandla ukuze abe ebusika ezinhle, futhi obhekwe entwasahlobo entsha yathinta ngokushesha ekukhuleni.
Ngakho ukutshala amagilebhisi entwasahlobo kunconywa ngaphambili kuka-April kungenzeka ukutshala imbobo uzilungiselele ngokushesha ngaphambi ukuthengwa izithombo, hhayi uyakuhlupha emsebenzini ekwindla. Ibanga Elegant uthanda ukushisa, ngakho lesi sitshalo kufanele itshalwe ohlangothini eningizimu. kahle kakhulu, uma kukhona odongeni lwezitini. It izogcina ukushisa kanye ukuyikhulula ebusuku simila. Ebusika, isebenze njengofakazi ukuvikelwa umoya abandayo.
Izitshalo ayikwazi zitshalwe ezindaweni izimbuku lapho etafuleni amanzi liseduze kakhulu. Inketho engcono yayiyobizwa ukutshala on nenhlabathi ukukhanya. Nokho, uma inhlabathi egcekeni lakho akulona okungcono, ungalilahli ithemba. Ungakwazi ukwakha okusezingeni eliphezulu flower embhedeni futhi usigcwalisa nenye isihlabathi, humus kanye Peat. Amagilebhisi kakhulu othanda ukudla okuhle futhi elinamanzi amaningi nenala oksijini, ngakho ngempela ehlathini siyabonga sokuvuna esihle.
Ngaphambi ukuthenga, qiniseka ukuthi yisithombo enempilo ngempela futhi luqinile. Ukulinganisa ubungako nezinso isimo ohlelweni impande. Inketho ekahle - kuba yisithombo kwanda esitsheni. Ngakho-ke kungase kungenzeki ukuthi uhlushwa ukufakelwa. Bunch kuqala Kulokhu kuyoba ngonyaka olandelayo, futhi ezimbili noma ezintathu ngeke kakade ujabulele izithelo okumnandi. Uma ukholelwa ukuthi ukubuyekezwa, nansi best etafuleni amagilebhisi Ukukhetha Russian.
Futhi manje ake sixoxe iziphi izinselele obhekana nazo cottager, abafika kusayithi amagilebhisi enhle. Ukutshala ulula, nalo uhlobo Ungasingatha ngisho imfundamakhwela. Into esemqoka ukuba uqaphele: Izinhlobonhlobo linamandla kuya izifo ezimbi kakhulu - kuba grey isikhunta futhi isikhutha. Ngakho-ke, ngisho noma ukhohlwa mayelana nokwelashwa kokuvimbela nesikhunta, isivini buthule kuzothatha. Yiqiniso, kungcono bangayeki ngokuphelele zokuvimbela, okuqinisekisiwe ukuthola isivuno esihle.
Lokhu sesitshalo kuyinto linesizotha ukuze kuyoletha ngisho ukungabi sokukhulelwa. Kodwa uma ufuna ngempela ukuba uthole isivuno esihle, kubalulekile ukuba banakekele izivini Ukudla okuningi kancane ngokucophelela. A esiningi ngeke asamukele, nje Okuphakelayo esidlekeni ekwindla potassium usawoti kanye ammonium nitrate entwasahlobo. Ngenkathi esebenzayo okhulayo kutuswa ukusebenzisa yenkukhu umquba. Kanye ngonyaka kunconywa ukondla umlotha - umthombo omkhulu umquba. Nokho, akufanele athole wathumba, kungenjalo isitshalo uyozishisa.
Cool sezulu kungabi nesidingo ukuthambisa ezengeziwe. izimpande umvini uvumele umswakama ukuqoqa ibanga elikhulu. Uma ihlobo kwaba sishisa futhi somile, amagilebhisi udinga ukunikeza usuku ngalunye ingxenye entsha umswakama oyigugu. Kodwa kufanele kwenziwe kahle. Lokhu ezihlukahlukene akawuthandi lapho amanzi hits amaqabunga. Basuke embozwe ansundu, njengoba uma wayelibulale ukhunta. Ngakho-ke, othomathikhi spray izinhlelo ezifana sokunisela ngenkasa isivini ukulingana kahle.
Isikhunta ebhuthini - lena enye umphumela ukuthambisa okungafanele. Singabulala imivini. Ngakho-ke, amanzi-ke ukuze singathwesi uthinte oluhlaza ingxenye, bese qiniseka athambise umhlabathi.
Lona omunye iphuzu okufanele sinake ezihlukahlukene amagilebhisi enhle. izinhlobonhlobo Umzali wanika engcono grade izakhiwo, futhi umphumela waba ukuthi kwakukhona isitshalo ne amajikijolo ezinkulu, okuyinto zingagcinwa isikhathi eside ehlathini, nokuthela kwabakhulekeli okusezingeni eliphezulu. Ebusika, amahlumela izinze futhi iphila, futhi izithelo efihlekile zingamelana zeqhwa phansi -25 degrees. Kodwa lokho akusho ubuhlungu bawe kahle Roll, ukubeka bese ufihle ungumvini nokuthi amagatsha ngesihlahla sonwele. Kukhona ezinye izindlela ezikhethekile ezisiza ukuvikela isitshalo kusukela amazinga eqile okushisa nokubanda, umoya kwezulu. Lokhu ukufakwa ebhokisini lokhuni, okuyinto usongwa simila, bese wonke isikhala ugcwele sawdust, noma amaqabunga.
Amagilebhisi Elegant - lena ingenye izinhlobo ethandwa kakhulu balimi Russian. Abalimi abanolwazi ngokuthi athi yilona okumnandi kunazo zonke ukuthi kwadingeka ukuba abeke kusayithi. Njalo ripens ekuseni futhi ungaguli, umvini ukuvuthwa ukuze obuphelele walo. Inyama lumnandi, ne amakinati ezinhle, kodwa kunambitheka kangcono kakhulu lapho eba overripening. Umvini elincane kungaba unike isivuno kufika ku-15 kg, okuyinto yalokho kumnandi.
Okunhlobonhlobo akuyona ezinezithelo kuphela kodwa futhi transportable, okuyinto ebaluleke ikakhulu uma uhlela ukuthumela izithelo emakethe. Yamathenda kanye namanzi, basuke ivikelwe igobolondo obukhulu. Ngakho-ke, ngisho nezinsuku ezimbalwa endleleni idluliswe kalula. Iminyovu cishe kabana, ngokungafani kuya izinhlobo kamuva. I negative kuphela - izitshalo yalesi ezihlukahlukene kunzima ngempela ukuthola emakethe. Akukho ngisho wahlanganyela zizalela yakhe kuyo kanye nemakethe kalula kungenziwa ukuthenga akuyona okufunayo.
"Festival" Strawberry - ibanga undeservedly ukhohliwe
Kungani utamatisi izithombo welulela? Amacebo eziwusizo
Indlela ukugcina yamaphephandaba mimosa, isikhathi injabulo entwasahlobo izinsuku?
Unyaka dahlia - ezikhula imbewu Indlela esheshayo
Ampelnye geranium - kukho olukhulu umklamo kwamafasitela balcony
Flooring Modern ekhishini (bheka isithombe). Kukhethwa Uthwale phansi
Indlela ukuthola ikheli nezinombolo zocingo idolobha: ngezindlela kancane lokudala
Munich Airport. Kanjani ukuze uthole Munich Airport?
Uhlolojikelele airliner Boeing 737-700
Kulungile e-cottage. Sizokumba umthombo wamanzi ngezandla zethu!
Shiya iphupho nokwenzeka - Imizimba wezemidlalo